Calaamadaha Noloshayda sida Virgo (Qeyb) & Zodiac ( Xiddigaha) - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Suuradda al-Buruuj (Suuradda 85 – Guryaha Xiddigaha) waxay ku sheegaysa Zodiac ( Xiddigaha).
Eebe wuxuu ku dhaartay Samada Xiddigaha leh (iyo Jidadkooda).Iyo Maalinta laysu yaboohay (qiyaamada)Iyo Dadka joogsan Maalintaas iyo waxayaalaha iman Maalintaas.
Suuradda Al-Buruuj 85:1-3
Suuratu Al-Buruuj waxay sheegtay in calamadaha Zodiac (Xidigaha) ay markhaati u yihiin maalinta qiyaame. Laakiin maxay taasi ka dhigan tahay?
Laba-iyo-tobanka calaamadood ee Zodiac-ka maanta waxay la xidhiidhaan xiddigiska iyo horoscope-ka. horoscope-ka maanta waxa uu saadaaliyaa hantidaada taariikhda dhalashadaada marka loo eego laba iyo tobankan Calamadood ee Zodiac. horoscope-ku wuxuu markaa ku hagayaa inaad hesho jacayl dhab ah (jacaylka horoscope), ama nasiib wacan iyo guusha xiriirka, caafimaadka iyo hantida. Calaamadahaas XNUMX-ka ah ee xiddigiska ee taariikhda dhalashadaada ku xiraya horoscope-kaaga gaarka ah waa:
Virgo: Ogosto 24 – Sebtembar 23
Miisaanka: Sebtembar 24 – Oktoobar 23
Scorpio: Oktoobar 24 – Noofembar 22
Sagittarius: Noofembar 23 – Diseembar 21
Capricorn: Diisambar 22 – Janaayo 20
Aquarius: Janaayo 21 – Febraayo 19
Kalluunka: Febraayo 20 – Maarso 20
Aries: Maarso 21 – Abriil 20
Taurus: Abriil 21 – Meey 21
Gemini: May 22 – Juun 21
Kansarka: Juun 22 – Luulyo 23
Leo: Luulyo 24 – Ogosto 23
Falaaga & Horoscope Casriga ah
Horoscope waxay ka timid Giriig horo (ώρα) oo macneheedu yahay ‘saac, xilli ama wakhti’ iyo Giriigga skopus (σκοπός) oo macneheedu yahay ‘ Yoolka ama calaamada la saarayo’. falaga wuxuu ka yimaadaa astro (άστρο) ‘xiddigga’ iyo hoy (λογια) ‘barashada’. Haddaba fikradda ku jirta horoscope-kan casriga ah ee xiddigiska ayaa ah in la calaamadiyo waqtiga dhalmada iyadoo loo eegayo xiddigaha Burjigu.
Laakiin tani miyay tahay qaabkii asalka ahaa ee ay dadkii hore u akhriyi jireen xiddigiska zodiac?
Waa maxay Zodiac? Xaggee ka timid?
Laba-iyo-tobanka Calaamadaha Zodiac waa xiddigaha xiddigaha ka muuqda dhulka inta lagu jiro sanadka. Suuradda al-Furqaan waxay inoo sheegaysaa in Eebbe laftiisu sameeyey xiddigaha xiddigaha.
Waxaa Khayr Badnaaday Eebaha Yeela Samada Burjiyo Yeelayna Dhexdeeda Siraaj (Qorrax) iyo dayax ifi. Suuradda al-Furqaan: 25:61
Muxuu Allaah u yeelayaa xiddigahan? Sidee dadkii hore u isticmaali jireen Burjika oo leh laba iyo toban calaamood?
Ka digtoonow! Ka jawaabista su’aashan waxay kuu furi doontaa horoscope-kaaga siyaabo cusub oo gebi ahaanba cusub. Waxay kugu qaadi kartaa safar ka duwan markaa waxaad damacsanayd inaad hubiso horoscope-ka calaamadda zodiac…
… in Al-kitaab (Bible)
Kitaabkii ugu da’da weynaa ee Kitaabka Quduuska ah (al kitab), oo la qoray xitaa Taurat ka hor, wuxuu ahaa Job. Ayuub waxa kale oo uu caddeeyey in xiddigaha uu Eebbe sameeyey:
9 Isagu waa Sameeyaha orso iyo Orion, ah Dood-wadaag iyo xiddigaha koonfureed.
9 Ayuub 9
Caamoos, oo ah nebi kale oo Kitaabka Qudduuska ah sidoo kale
Caamoos 5: 8
The Dood-wadaag waa xiddigo ka kooban qayb ka mid ah Taurus kooxeed. Haddii uu Ayuub iyaga kaga hadlo buug in ka badan 4000 oo sano jir ah, xiddigaha zodiac ayaa nala joogay wakhti aad u dheer. Waxaan baran karnaa sidii ay dadkii hore u isticmaali jireen zodiac si ay nafteena u hagaan si ka duwan horoscope-ka maanta. Tani waxaynu ku baadhaynaa anagoo baadhna kooxda Virgo.
Horoscope & Zodiac oo ka yimid Abuuraha Laftiisa
Suuradaha al-Furqaan, al-Baruuj iyo Job wuxuu caddeeyey in xiddigaha Burjigu ay ahaayeen ‘calaamadaha’ uu Eebbe sameeyay bilowgii waqtiga. Waa hore ka hor inta aan farriinta nebiyada lagu qorin buugaagta, waxaa la gelin jiray xiddigaha sida sawiro si ay uga sheekeeyaan qorshaha Eebbe. Zodiac-kii asalka ahaa ma ahayn inuu nagu hago hanti, jacayl iyo nasiib wacan iyadoo ku xiran tahay sanadka dhalashadayada. Burjigu waxa uu ahaa sheeko muuqaal ah si uu noogu hago Jidka Toosan.
Tan waxaan ka aragnaa xisaabta abuurista ee bilowga Taurat. Lixda maalmood ee uunka la abuuray waxay odhanaysaa:
14 Ilaahna wuxuu yidhi, Iftiimmo ha ahaadeen meesha bannaan oo samada dhex ah si ay u kala soocaan maalinta iyo habeenka; oo ha u ahaadeen calaamooyin, iyo xilliyo, iyo maalmo iyo sannado;
Bilowgii 1: 14
Xiddigaha casriga ahi waxa ay ku andacoonayaan in ay wax ka og yihiin arrimaha bini’aadamka iyo dhacdooyinka dhulka ka jira iyada oo loo cuskanayo booska xiddigaha. Laakiin maaha xiddigaha saameeya nolosheena. Waxay yihiin calaamado lagu calaamadiyo dhacdooyinka uu qorsheeyay abuuruhu – oo wuxuu saameeyaa nolosheena.
Maaddaama abuurista xiddiguhu ay ahaayeen inay ‘calaamadeeyaan waqtiyada xurmada’ iyo horoscope-ka macnaheedu waa ‘horo’ (muddada waqtiga) + ‘skopus’ (si loo calaamadiyo diiradda), ujeeddada ka dambeysa kooxuhu waxay ahayd inaan ogaano horoscope-kiisa iyada oo loo marayo laba-iyo-tobanka. Calaamadaha Zodiac. Waxay sameeyaan Sheeko Xiddigaha – falaga asalka ah.
Falaaga iyo Nabiyada oo wada jira
Barashada xiddigaha (astroloji) si loo calaamadiyo wakhtiyada xurmada leh (horoscope) ma sheegayso dhammaan wixii uu abuuray ee u qorsheeyay dhacdooyinkan. Diiwaanka qoran ee abuuraha ayaa bixinaya tafaasiil dheeraad ah. Waxaan tusaale u aragnaa dhalashadii Nabi Ciise Al Masih NNKH. Injiilku wuxuu qoray sida xiddigiyayaashu u fahmeen dhalashadiisa iyagoo daraaseeyay xiddigaha. Waxay leedahay:
Goortii Ciise ku dhashay Beytlaxamtii Yahuudiya, waagii Herodos boqorkii ahaa, waxaa Yeruusaalem bari kaga yimid niman xigmad leh iyagoo leh, 2 Xaggee buu joogaa boqorka Yuhuudda ee dhashay? Waayo, bari ayaannu xiddigtiisii ka aragnay, oo waxaannu u nimid inaannu caabudno,
Matayos 2: 1-2
Magi-ga waxa ay ka garanayeen xiddigaha ‘Cidda’ dhashay (Masih). Laakiin xiddiguhu ma u sheegin ‘halkee’. Taas awgeed waxay u baahnaayeen waxyiga qoran.
3 Goortuu boqor Herodos waxan maqlay, ayuu welwelay, isaga iyo reer Yeruusaalem oo dhan. 4 Oo intuu isu ururiyey wadaaddadii sare iyo culimmadii dadka oo dhan, ayuu weyddiiyey meeshii Masiixu ku dhalan lahaa. 5 Oo waxay ku yidhaahdeen, Beytlaxamtii Yahuudiya, waayo, sidaasaa nebigii u qoray,
6 Adigu Beytlaxam, oo dhulka Yahuudah ahay,
Kuma aad yaridba caaqillada Yahuudah dhexdooda,
Waayo, waxaa adiga kaa soo bixi doona taliye,
Kan dadkayga Israa’iil u talin doona.
Matayos 2: 3-6
xiddigiyayaashu waxay u baahnaayeen nebiyadu inay si buuxda u fahmaan waxa ay ku arkeen xiddiga. Maantana waa sidaas oo kale. Waxaynu ka heli karnaa aragtidii ay bini’aadmigii ugu horreeyay ka heleen horoscope-ka xiddigiska ee zodiac-kii hore. Laakiin waxaan ku heli karnaa faham dheeri ah iyada oo loo marayo qoraallada nebiyada kuwaas oo sii horumarinaya calaamad kasta oo zodiac ah. Tani waa waxa aan samayn doono iyada oo loo marayo calaamad kasta oo xiddigiska ah ee sheekada Zodiac asalka ah.
Bilawga Sheekadaada Zodiac
Sheekadan xiddigaha ku qoran ilaa bilowgii taariikhda waxay kuu fidisaa martiqaad. Waxay kugu martiqaadaysaa inaad ka qaybgasho qorshahan abuuraha ah. Laakiin ka hor inta aynaan ka qayb qaadan sheekadan waa in aan fahannaa. Halkee ayay sheekadu ka bilaabantaa? Maanta akhriska horoscope caadi ahaan wuxuu ka bilaabmaa Aries. Laakiin tani sidaas may ahayn wakhtiyadii hore, markii ay ku bilaabatay Virgo (eeg halkan wixii faahfaahin ah ka Esna Zodiac).
Waxaan ku bilaabaynaa sheekada Zodiac at Virgo.
Waa kan sawirka xiddigaha samaynayo Virgo. Virgo waa gabadh yar, bikrad ah. Laakin waa wax aan macquul aheyn in la arko Virgo (naagtan bikrad ah) ee xiddigaha. Xiddigaha laftoodu si dabiici ah uma sameeyaan sawirka naagta.
Habeenka sawirka Virgo. Ma arki kartaa naagta bikrada ah?
Virgo oo leh khadadka isku xira
Xitaa haddii aan ku xirno xiddigaha ku jira kooxda Virgo oo leh sadar sida sawirkan wikipedia, weli way adag tahay in la ‘arko’ haweeney leh xiddigahaas, iska daa haweeney bikrad ah.
Laakiin tani waxay calaamad u ahayd ilaa hadda inta diiwaanadu jiraan. Virgo waxaa badanaa lagu muujiyaa si faahfaahsan, laakiin tafaasiisha kama yimaadaan kooxda lafteeda.
Sawirka naag Virgo ah oo lagu dhejiyay xiddigaha si faahfaahsan
Hoos waxaa ku yaal dhammaan Zodiac ee Macbadka Masar ee Dendera, oo ku taariikhaysan 1st qarnigii BCE. Burjigan wuxuu ka kooban yahay 12 calaamadood oo Zodiac ah. Virgo waxay ku wareegsan tahay casaan. Sawir gacmeedka midig wuxuu si cad u muujinayaa sawirada zodiac. Waxaad arkaysaa in Virgo ay hayso iniin hadhuudh ah. Iniinkan hadhuudhku waa xiddigta Spica, xiddiga ugu ifka badan kooxda Virgo.
Dendera Zodiac ee Masar. Virgo waxay ku wareegsan tahay casaan
Halkan waxaa ah Spica oo ku taal sawirka cirka habeenkii, iyada oo xiddigaha Virgo ay ku xiran yihiin khadadka.
Virgo Constellation oo leh xiddig Spica oo la soo bandhigay
Laakiin sidee loo ogaan karaa in Spica ay tahay iniin hadhuudh ah (mararka qaarkood dhegta hadhuudhka)? Uma muuqato xubinta taranka lafteeda, sida haweeney bikrad ah aysan uga muuqan kooxda Virgo.
Tani waxay ka dhigan tahay in Virgo – Haweeney bikrad ah oo leh iniinaha hadhuudhka – aan laga abuurin xiddigaha laftooda. Hase yeeshe, bikraddii leh iniinaha hadhuudhka ayaa hore looga fikiray ka dibna waxaa la saaray kooxda. Haddaba xaggee ka timid Virgo oo leh farcankeeda? Yaa markii hore maskaxda ku hayay bikrada ka dibna iyada iyo farcankeeda u dhigay sida Virgo xiddigaha?
Sheekada Virgo ee Bilawga
Jannada dhexdeeda, markii Aadam iyo Xaawa caasi ku noqdeen, oo Eebbe ka horyimid iyaga iyo maskii (Shaydaan) wuxuu Shaydaanka u ballan qaaday:
Bilow 3: 15
Jilayaasha iyo xiriirkooda ayaa lagu sii sheegay Jannada dhexdeeda. Haweeneyda leh farcanka waa macnaha asalka ah ee Virgo. Dadkii hore waxay isticmaali jireen Kooxda Virgo si ay u xusuustaan ​​Ballanqaadkan
Eebe wuxuu u ballan qaaday in ‘farcan’ (macnaha ah ‘abuur‘) waxay ka iman doontaa naag – iyada oo aan la sheegin midowga ay la leedahay nin – sidaas darteed iyadu waa bikrad. Farcanka bikraddu waxay burburin doontaa ‘madaxa’ abeesada. Qofka kaliya ee ay dhashay naag bikrad ah waa nabi Isa al Masih NNKH. Imaatinka Masih oo ka yimid bikrad ayaa lagu dhawaaqay bilowgii wakhtiga, sida si buuxda ayaa halkan loogu sharaxay. Bini’aadamka ugu horreeya, si ay u xusuustaan ​​ballanqaadkii Abuuraha, waxay abuureen Virgo oo leh farcankeeda (Spica) waxayna dhigeen muuqaalkeeda kooxda si ay farcankoodu u xusuustaan ​​ballanqaadka.
Haddaba Qorshihii Alle oo loo bixiyey 12 sawir oo lagu xasuusan yahay bahda Burjika, ayaa qarniyadii hore lagu darsay, looga sheekeeyey, loogana sheekeeyey qarniyadii laga soo bilaabo Hazrat Adam ilaa Xasrat Nuux/Nuux. Daadkii ka dib, farcankii Nuux waxay kharribeen sheekadii asalka ahayd waxayna noqotay horoscope-ka maanta la isticmaalo.
Isa al Masih iyo Horoscope-kaaga Virgo
Nabi Ciise Al-Masih NNKH ayaa akhriyay Horoscope-kan Virgo-ga ah markuu yidhi:
23 Kolkaasaa Ciise u jawaabay, oo wuxuu ku yidhi, Saacaddii way timid uu Wiilka Aadanahu ammaanmi lahaa. 24 Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Xabbad sarreen ah haddaanay dhulka ku dhicin oo dhiman, keligeed bay iska jiraysaa, laakiin hadday dhimato, midho badan bay dhashaa.
Yooxanaa 12: 23-24
Nebi Isa al-Masih wuxuu isu sheegay inuu yahay farcankaas – Spica – taas oo noo gaari lahayd guul weyn – ‘miraha badan’. Tani ‘farcan’ ee bikraddu waxay timid ‘sacad’ gaar ah = ‘horo’. Ma uusan iman saacad kasta laakiin wuxuu yimid ‘saacaddii’. Waxa uu sidaas u yidhi si aan u calaamadeyno (skopus) saacadaas oo aan u raacno sheekada – akhri horoscope uu dhigay.
Markaa laba iyo tobanka calaamadood ee zodiac waxay u yihiin dhammaan dadyowga oo dhan. Ma jiro hal calaamad oo horoscope kaliya oo ku salaysan taariikhda dhalashadaada. Calaamadaha 12 waxay sameeyaan sheeko dhammaystiran si ay u hagaan noloshaada, haddii aad doorato inaad raacdo, si aad nolosha weligeed ah u hesho xiriir waara oo lala yeesho Abuuraha Zodiac.
Akhrinta Horoscope Virgo-gaaga Maalinlaha ah ee Zodiac-kii Hore
Nebiyadii waxay dejiyeen saacado xurmo leh iyo waqtiyo, waxay nagu martiqaadeen inaan xusno, oo u noolaanno si waafaqsan. Tan iyo horoscope = horoskoob (saac) + skopus (calaamad si loo ilaaliyo) waxaan ku samayn karnaa taas iyada oo zodiac isticmaalaya rikoor qoran si ay u sharxaan Zodiac xiddigaha si buuxda. Nebi Isa al Masih NNKH laftiisa ayaa noo calaamadiyey Virgo + Spica ‘saacaddii’. Halkan waxaa ah akhriska Horoscope adiga oo ku saleysan kan:
Ka digtoonow inaadan dhaafin ‘saacadda’ uu ku dhawaaqay nebi Isa al Masih sababtoo ah waxaad aad ugu mashquulsan tahay maalin walba inaad raacdo waxyaabo aan muhiim ahayn. Taas awgeed, qaar badan ayaa waayi doona inay noqdaan ‘abuurka badan’. Noloshu waxaa ka buuxa waxyaalo qarsoon, laakiin furaha nolosha weligeed ah iyo maalka dhabta ah waa inaad furto sirta ‘abuurka badan’ naftaada. Waydii abuuraha maalin kasta inuu kugu hago fahamka. Maadaama uu calaamadda ku dhejiyay Xiddigaha Virgo iyo sidoo kale diiwaankiisa qoran, wuxuu ku siin doonaa aragti haddii aad weydiiso, garaac oo raadso. Qaab ahaan, astaamaha Virgo ee ku habboon tan waa xiiso iyo rabitaanka in la qodo jawaabaha. Haddi calaamadahan ay calaamadeeyaan ka dib samee ficil adiga oo raadinaya aragti dheeraad ah Virgo.
Ka sii qoto dheer ee Virgo iyo sheekada Zodiac oo dhammaystiran
Ku sii wad si aad u barato sheekada oo dhammaystiran sidii markii hore lagu bixiyay adiga oo raacaya xiddigaha Zodiac ee hoose. U isticmaal hanuuninta Jidka Toosan.
Cutubka 2 – Miisaanka: Lagu Miisaamay Miisaanka Jannada
Cutubka 3 – Scorpio: Dagaalka Dhimashada
Cutubka 4 – Sagittarius: Guushii u dambaysay ee Archer
Cutubka 5 – Capricorn:-Kalluunka Ariga ayaa sharaxay
Cutubka 6 – Aquarius: Wabiyada Biyaha Nool
Cutubka 7 – Kalluunka: Dad badan oo Gudbinaya Addoonsiga
Cutubka 8 – Aries: Wanka Nool!
Cutubka 9-Taurus: Garsooraha iman doona
Cutubka 10-aad -Gemini: Royal Sons & Cosmic Aroosadda
Cutubka 11-aad -Kansarka: Ka soo kaca dambaska dhimashada
Cutubka 12-aad -Leo: Libaaxii Ciyey Ayaa Talin Doona